PHOTOS. Romeo Elvis: waa Lena Simonne, oo ah wehelka "rap"
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Romeo Elvis: waa Lena Simonne, wehelka rap ...
In June 2019, Romeo Elvis, oo loogu magacdaray 3 xafladaha NRJ Music Awards 2019, wuxuu la wadaagay qoraal ku saabsan akoonkiisa taasoo ka yaabisay dhamaan taageerayaashiisa: fanaaniinta reer Beljim iyo walaalkii weynaa ee heesta Angèle ayaa aaminsiiyey in gacalisadiisa uur bay lahayd cunuggooda koowaad. Kuwa uu jecelyahay waxay awood u heleen inay ogaadaan sawir lammaanayaal ah oo ay heestaasi ku taabtay caloosha saaxiibkiis, Lena Simonne. Afar maalmood ka dib, waxay kor u qaadeen xiisaha ku saabsan uurka la sheegay. Waxay ahayd wax lagu farxo oo lagu dhawaaqayay sii deynta cajaladdii heesta Soleil oo ay quruxdeeda quruxda badan ee indhaha indhaha ka gaysatay ka soo qayb gashay.
Lena Simonne sidoo kale waxay caan ku tahay sida gacaliyaheeda. Iyo sabab wanaagsan, gabadha yari waa tusaale iyo tirin in ka badan macaamiisha 199 000 ee barta Instagram halka ninkiisuna leeyahay hal milyan oo raac ah. Maalmihii la soo dhaafay, sawirradeeda waxaa lagu dhajiyay tareenno badan oo tareenka dhulka hoostiisa ah ka dib wada shaqeynteeda ay la yeelato astaanta Galilis Gal.
Tani maahan markii ugu horreeysay ee ay nooc caan ah soo bandhigto adeegyada gabadha da 'yarta ah oo ka mid ah saameynta ugu caansan. Waxay horay u amaahatay wajigeeda quruxsan Chantelle ama Sézane. Guul run ah oo loogu talagalay qofka noloshiisa la wadaaga Romeo Elvistan iyo 2015. Lammaanaha ayaa jecel inay la ciyaaraan shaandheeyeyaasha taleefannadooda gacanta si ay ugu duubaan fiidiyowyo qosol leh shabakadaha bulshada.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-romeo-elvis-qui-est-sa-compagne-lena-simonne-987106